MUQDISHO, Soomaaliya - Tiro hoobiyeyaal ah ayaa kusoo dhacday xafaado ku dhow dhismaha Madaxtooyadda Soomaaliya ee magaaladda Muqdisho maanta oo Khamiis ah, sida laga soo xigtay illo wareedyo dhanka Booliska iyo dadka degaanka ah.
Inta la hubiyay illaa iyo haatan waxaa weerarkaan madaafiicda loo adeegsaday ku dhaawacantay Lix qof oo shacab ah, kuwaasoo ay ku jireen caruur iyo haween, inkasta oo aanan lasoo warin hadii ay jirto dhimasho uu sababay madfaca.
Goobjooge u waramay warbaahinta maxaliga ah ee Muqdisho ayaa wuxuu daboolka ka qaaday in dadka dhaawacmay loola caray Isbitaal si xaaladooda caafimaad loola tacaalo, isagoo carabka ku dhuftay inay jireen kuwa ay xaaladooda liidato.
"Niyow xaafado ku yaala agagaarka Madaxtooyadda Soomaaliya, gaara ahaan xaafadaha jira dhanka degmada Wardhigleey waxaa ku habsaday Hoobiyayaal. 6 qof oo Rayid ah ayaa ku dhaawacmay. Dhimasho ma jirto," ayuu yiri Goobjoogaha.
Sarkaal ka tirsan Booliska Soomaaliya ayaa u sheegay Warsidaha Garowe Online inay ku guda jireen baaris ku saabsan halka laga soo ganay Hoobiyeyaasha, isaga oo carabka ku dhuftay inay soo bandhigi doonan natiijadda baaristooda.
"Dhaawac ayuu khasaaraha ku kooban yahay. Ma hayno wax dhimasho ah. Baaris ayaa ku socota halka laga soo tuuray Madaafiicda, waana soo gudbin doonaa natiijada kasoo baxda," ayuu hadalkiisa kusii daray sarkaalka u waramaay Warsidaha GO.
Ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkaan madaafiicda loo adeegsaday, balse, kooxda xiriirka la leh Shabakadda Al-Qaacida ee fadhigeedu yahay dalka Suuriya ayaa horey u sheegay weeraro noocaan ah oo Madaxtooyadda lagu qaaday.
Amniga Villa Soomaaliya ayaa ah mudooyinkii dambe mid liita, oo ay hareeraheeda ka dhaceen qaraxyo baabuur loo adeegsaday, weerar toos ah iyo hoobiyaal dhowr jeer lagu soo tuurey saddexdii bilood ee lasoo dhaafay.
Tiro Madaafiic ah ayaa ku dhacday nawaaxiga xarunta Villa Soomaaliya...
Qaraxyo laga maqlay Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay
Soomaliya 01.03.2018. 16:30
Madaafiic ku dhacday nawaaxiga Villa Soomaaliya
Soomaliya 11.01.2018. 15:37
Muxuu Farmaajo uga hadlay Khudbadiisa furitaanka Kalfadhiga 4aad ee BF?
War Saxaafaded 10.09.2018. 18:01
Cabdalla oo shaaciyay in Sir xasaasi ah lagala baxay Xafiiska NISA
Soomaliya 30.08.2018. 13:38
Maxaa looga hadlay Shirka Gollaha Wasiirada Soomaaliya? [DAAWO]
Soomaliya 30.05.2018. 23:05
Qaraxyo kale oo ka dhacay Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay
Soomaliya 26.03.2018. 11:55